“အတွေးစလေးတွေ”: အမျိုးသားနေ့ . . .
အမျိုးသားနေ့ . . .
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် ၁၀ရက် အမျိုးသားနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။
ခေတ်တွေပြောင်း၊ စနစ်တွေပြောင်း၊ သင်ခန်းစာတွေ ပြောင်းကုန်တာကြောင့်
ဒီဘက်ခေတ်ကလေးတွေခမျာ အမျိုးသားနေ့ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိကြတော့ပါ။ သိပ္ပံတွဲယူကြတဲ့ ကျောင်းသားတွေက ပိုဆိုးပါတယ်။ ဒါတောင် စကားပြေမှာ အမျိုးသားပညာဝန်ဦးဖိုးကျားရေးတဲ့ အမျိုးသားနေ့စကားပြေပါနေလို့ တော်ပါသေးတယ်။ ခက်တာက ကျောင်းသားတွေက စာဆိုတာကို စာမေးပွဲအောင်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲ ကြည့်ကြတာဖြစ်လို့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖြန့်စဉ်းစားဖို့ စိတ်မကူးတာပါ။ သမိုင်းနောက်ခံကိုလည်း ရှာဖို့ဖွေဖို့ ၀ါသနာမပါ၊ ယောင်လို့လည်း အိပ်မက်မမက်ပါ။ သူတို့မမက်လည်း ကိုယ်တို့ကတော့ အိပ်မက်တွေ အငှားထည့်ပေးနေပါတယ်။
မနေ့ကပဲ ကလေးတစ်ယောက်ကမေးပါတယ်။ အမျိုးသားနေ့ကျတော့ရှိပြီး အမျိုးသမီးနေ့ကျတော့ ဘာကြောင့် မရှိတာလဲတဲ့။ တော်တော် ရွှေဥာဏ်တော်စူးရောက်တော်မူတဲ့ သကောင့်သားကို ကျည်ပွေ့နဲ့ ဂုဏ်ပြုချင်စိတ်ပါ ပေါက်သွားပါရဲ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကလေးတွေကို သမိုင်းသင်ပေးဖို့ လိုနေပြီဆိုတာတော့ သဘောပေါက်သွားမိပါတယ်။ ကြာရင် ကိုယ်တို့တွေလည်း သမိုင်းမရှိတဲ့လူမျိုးတွေ ဖြစ်ကုန်ကြပါတော့မယ်။ နောက်လှည့်ကြည့်လည်း ဗလာ၊ ရှေ့မျှော်ကြည့်လည်း ဟာလာဟင်းလင်းအဖြစ်မျိုးကတော့ စဉ်းတောင်မစဉ်းစားသင့်တဲ့ အခြေအနေပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်တို့မှာ ကလေးတွေကို နောက်ကိုလည်းကြည့်တတ်၊ ရှေ့ကိုလည်း မြင်နိုင်အောင် နတ်မျက်စိပုလင်းကွဲတွေကို အတင်းဖြဲပေးနေရပါတယ်။ ဒီကြားထဲ ပုံမှန်တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကိုလည်း အောင်မြင်အောင် ကြိုးစားပေးနေရပါသေးတယ်။
တစ်ခါတစ်ခါ စဉ်းစားမိပါတယ်။ နိုင်ငံတကာက ကျောင်းဆရာတွေဟာ ကိုယ်တို့ထက် ပိုတော်ချင်တော်မယ်။ ကိုယ်တို့လောက်တော့ တာဝန်မကြီးဘူးလို့ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် သိရသလောက်ကတော့ သူတို့ဆီမှာ ဘာမဆို ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ယူကြတာများပါတယ်။ ကိုယ်တို့ဆီမှာကျတော့ အရာရာ ဆရာကိုပုံအပ်ကြလွန်းလို့ ဆရာတွေမှာ တာဝန်တွေ တစ်ပုံတစ်ခေါင်းကြီးနဲ့ ခေါင်းမဖော်နိုင်အောင် အလုပ်ရှုပ်ရလွန်းပါတယ်။ ဒီလို အပြင်တာဝန်တွေများလွန်းနေတာကြောင့် အဓိကတာဝန်ဖြစ်တဲ့ သင်ကြားမှုပိုင်းမှာ အားနည်းကုန်ကြတာဖြစ်မယ်လို့လည်း တွေးကြည့်မိပါတယ်။ ဒါကတော့ ကိုယ့်အတွေးပါ။ ဟုတ်ချင်ဟုတ်မယ်၊ ဟုတ်ချင်မှလည်း ဟုတ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အဓိကတာဝန်ကိုသာ ဖိဖိစီးစီး တာဝန်ယူကြရရင် ပိုတော်လာမှာတော့ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲ သေချာပါတယ်။ ဒါဆို ကိုယ်တို့ကျောင်းသားတွေကို ဘယ်သူတွေက ကူညီလမ်းညွှန်ပေးကြမလဲ။ အဖြေရှာလို့ အခုထိမရသေးတဲ့ ပုစ္ဆာပါ...
ရက်ကြီး နေ့ကြီးတွေရောက်ရင် တွေးစရာလေးတွေက ပေါ်လာတော့တာပါ။ တွေးတွေးပြီး အကောင်အထည်ဖော်ကြည့်လိုက်၊ မအောင်မြင်လိုက်၊ ပြန်တွေးလိုက်နဲ့ပဲ ခေါင်းကဆံပင်တောင် အနက်အရေအတွက် နည်းလာပေါ့။ ။
Posted by Han Kyi at 8:53:00 am
အိပ်မက်သူဌေးကြီး . . .
ဟိုရွှေ့ သည်ပြောင်း ဖိုးသံချောင်း . . .
နားနားနေနေ မနေနိုင် . . .
တန်ဆောင်တိုင်ရဲ့ ကျက်သရေ . . .
ဆင်းရဲခြင်း လွတ်ကင်းအောင် . . .
ငြိမ်းချမ်းရေး . . .
သံချောင်းတို့အဖေ . . .
ရာသီတွေး . . .